Izintandokazi zibandakanya iNiagara Falls, iGrand Canyon, iSahara, iNtaba i-Everest, uLwandle oluFileyo, iHa Long Bay
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhenketho lokuzonwabisa » Izintandokazi zibandakanya iNiagara Falls, iGrand Canyon, iSahara, iNtaba i-Everest, uLwandle oluFileyo, iHa Long Bay
Ukhenketho lokuzonwabisa • IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • iindaba • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ityala lemifanekiso: lzf / Shutterstock
Ngamazwe athile aqala ukuphakamisa izithintelo kubahambi abagonyiweyo, iiHashtags ze-Instagram zezimanga zendalo ezidumileyo zibonisa umnqweno wokuhamba kwabakhenkethi. Inkampani yase-UK ejongene nokonga umbane ikhuphe ingxelo.
Abantu baseMelika, baseYurophu, amaTshayina, nabahambi baseJapan babala iintsuku zokuphinda baphonononge umhlaba kwakhona kwinyani ye-COVID-19 eyadlulayo.
I-Hash Tags kwi-Instagram luphawu oluhle apho abahambi banokufuna ukuya khona kwakhona, kunye neNiagara Falls ecaleni kweYosemite Park kunye Grand Canyon baphezulu kuluhlu
Ngelishwa iiphiramidi ezinkulu zaseGiza zifumene elona nani lincinci lamaHashtag kwi-Instagram ngexesha lengxubakaxaka eqhubekayo, kodwa ngokugweba ngokuthandwa kweephiramidi oku kuyakutshintsha, nje ukuba umhlaba uvulwe kwakhona
Ukunganqweneleki kohambo lokhenketho lwe-COVID ziindawo ezinjengeNtaba iKilimanjaro, kunye neVictoria Falls. Eli leligi linye elilungele ukunyuka kwileli ye-Instagram njengeKomodo Island, iAngel Falls eVenezuela okanye iGreat Barrier Reef e-Australia.
Inani eliphezulu lokugonywa eMelika, kunye nokuvulwa kwakhona kwelizwe kukhenketho lwasekhaya, babuyisela abakhenkethi baseMelika endleleni kwaye kuyabonisa.
Kwakhona i-Iceland ivulelekile kubakhenkethi kwaye ukukhanya okuMntla kwaba yeyona nto bayithandayo phakathi kwabo bathumela i-Instagram.
INtaba i-Everest eNepal ihlala iyindawo yomlingo kwi-Instagram. Umboniso weFashoni ozayo ngaphezulu kweyona ncopho iphakamileyo emhlabeni iya kongeza iRekhodi yeHlabathi yeGuinness kulo mfanekiso.
Uninzi lweeNdalo eziMbiweyo okwangoku zi:
Eyona ndawo idume ngeNdalo ilizwe
#1 Niagara Falls ECanada / eUSA 5,762,714
#2 Yosemite i-USA 5,448,936
#3 Grand Canyon i-USA 4,648,931
#4 I-Aurora Borealis / Izibane zaseMantla Ayisilend 3,362,055
#5 ISahara KuMntla Afrika 2,661,348
#6 Galapagos Islands Ekhuwado 2,012,669
#7 INtaba Everest I-China / Nepal 1,793,316
#8 IDanube Delta Romaniya 1,499,237
#9 ULwandle Olufileyo IJordani / uSirayeli 1,288,628
#10 EHa Long Bay Vietnam 1,269,970
Ummangaliso wendalo onomdla kakhulu kwi-Instagram ngu Niagara Falls, ebekwe kwi-boarder yase-Canada nase-USA, ngaphezulu I-5.7 yezigidi zee-hashtag kwi Instagram.
IPaki yeSizwe yaseYosemite, e-USA
Ityala lemifanekiso: Andrew Opila / Shutterstock
Isithsaba njengoyena mntu u-Instagrammable wendalo emhlabeni, i-Yosemite National Park iye yaqhatha nje i-5,000,000 ye-Instagram hashtags kwi-media media app eyaziwayo.
Kuthathwa njengokumela amandla, ukuzingisa kunye noxolo, i-Yosemite National Park eMelika likhaya lamakhulu eemitha zesikwere zemimangaliso yendalo, ukusuka kwiingxangxasi ezinesisa ukuya kumadlelo amangalisayo nakwiintlambo. Abo batyelele ukumangaliswa kwendalo bazalisa ukutya kwabo ngeefoto ezijonge ezoyikisayo kodwa ezinomtsalane zomkhenkce. Ngokuzibandakanya kunye nefoto yomtshato ephoswe kuyo, uYosemite ubonakala eyindawo efanelekileyo yesicelo esingalibalekiyo kunye nesifungo.
I-Niagara Falls, eCanada
Ukuyibeka njengowesibini kummangaliso wendalo we-Instagram emhlabeni, iNiagara Falls yaqokelela ii-hashtag ezingama-4,607,444 ezinomtsalane kwi-Instagram.
Ngobuninzi beendawo zabakhenkethi ezikufutshane nale ndawo, amawaka ayathontelana ukuya kwindawo ephawuleka yonke imihla eCanada ukuze abone iingxangxasi zekristale ezimileyo apho kwaye babambe indawo yokuma phambi kwempompo yesibini ende kunazo zonke emhlabeni.
IGrand Canyon, e-USA
Ityala lemifanekiso: Jim Mallouk / Shutterstock
Edityaniswe njengowona mbono mkhulu waseMelika kufuneka abonwe nguTeddy Roosevelt, ayimangalisi into yokuba iGrand Canyon ibeka njengowesithathu kummangaliso wendalo emhlabeni.
Ngeemayile ezingama-277 ubude, isimangaliso esidumileyo sejoloji sityelelwa ngabakhenkethi abazizigidi ezi-6 ngonyaka, kungoko kungamangalisi ukuba indawo efudumeleyo ye-ombre iye yahlaselwa amaxesha angaphezulu kwama-4,000,000 kwi-Instagram ukuza kuthi ga ngoku. Imidwebe kakuhle ngendalo, iGrand Canyon yaziwa ngokuba yenye yezona ndawo zintle kakhulu kodwa ezilahla imihlathi emhlabeni.
Intlango yeSahara, eAfrika
Intlango yokuqala kuluhlu, iSahara ifumana isihloko sesine esimangalisayo sendalo engummangaliso emhlabeni, ene-hashtag ezingaphezu kwama-2,200,000 ze-Instagram zizonke.
Ukuthatha indawo ebabazekayo ye-8,600,000 yeekhilomitha, iSahara iqhagamshela kumazwe ali-11 ase-Afrika kwaye iquka isithathu selizwekazi liphela! Iindunduma ezinomtsalane zilikhaya kwizilwanyana ezanyisayo ezingaphezu kwama-70, ukanti isimangaliso sendalo sihlala sisaziwa ngokuzola kwaso nokuzola okuphefumlayo.
IDanube Delta, eRomania
Ityala lemifanekiso: aaltair / Shutterstock
IDanube Delta yaseRomania yajikeleza eyona mihlanu mihle yemimangaliso yendalo, ithatha ii-hashtag eziphezulu ze-1,638,573 kwi-Instagram.
Olwesibini ngobukhulu kuhlobo lwayo eYurophu, iDanube River Delta ngumhlaba owenziwe ngentlenga ehanjiswe ngumlambo yaya kulwandlekazi olujikelezileyo. Umlambo odlamkileyo oluhlaza okwesibhakabhaka utsala uninzi lwabakhenkethi, uninzi lwabo lubhala utyelelo lwabo ngefoto enyanzelekileyo ye-Instagram bonwabile kukhenketho lokuphumla okanye ngokubamba izilwanyana zasendle ezingqongileyo.
Iziqithi zaseGalapagos, e-Ecuador
Ukuwa kufutshane kwabahlanu abaphezulu, iiIiqithi zeGalapagos zibeka kwindawo yesithandathu ngobuninzi bemimangaliso yendalo, enee hashtag ezili-1,612,457 ezivela kubakhenkethi.
Isekwe e-Ecuador, iziqithi zeGalapagos zihlala kwikhaya elinentaba-mlilo kwaye ziyaziwa ngokukhankanywa kwabo kwithiyori kaDarwin. Ngaphezu, Islands Galapagos ibekwe kufutshane neikhweyitha, ethetha ukuba iindwendwe banokonwabela imozulu eshushu unyaka wonke!
Ngelixa iziqithi ngokwazo zisebenza njengendawo emangazayo, iifoto ezininzi ze-Instagram med zemvelo zendalo ezinokufumaneka apho, zisenza indalo yendalo indawo efanelekileyo kwabo bathanda izilwanyana zasendle!
IHa Long Bay, eVietnam
Ityala lemifanekiso: sanyanwuji / Shutterstock
Isithsaba njengesixhenxe sesimangaliso esidumileyo se-Instagram, iHa Long Bay eVietnam iye yafumana amaxesha angama-1,243,473.
Inika abakhenkethi imiqolomba emikhulu, amanzi eemeraldi kunye neziqithi eziqingqiweyo kwilitye lekalika, iHa Long Bay yindawo eyaziwayo yokunyuka, ukuntywila kunye nokuhamba. Ngobuninzi bezilwanyana zaselwandle kunye neenqaba zelitye elicekethekileyo, ukucwangciswa kwendalo kweHa Long Bay kudala umfanekiso-ogqibeleleyo wolwandle lweendwendwe ezijonge ukuphucula ukutya kwazo.
IAurora Borealis, eIceland
Yaziwa ngcono njengeZibane zaseMantla, i-Aurora Borealis e-Iceland ifumana isihloko sesibhozo esimangalisayo sokumangalisa kwendalo emhlabeni, ngokufumana ii-hashtag ezili-1,167,915 okwangoku.
Ebizwa emva kwesithixokazi saseRoma sokusa, isibhakabhaka se-Aurora Borealis sibabalwe ngumboniso omangalisayo wobusuku obumnyama obumnyama. Nangona zingenakulinganiswa, abakhenkethi banethamsanqa ngokwaneleyo lokubonela amava omnyhadala yenye yezona zinto zintle zendalo kwiplanethi, kunye nemijelo yokudanisa yokukhanya okuqaqambileyo esibhakabhakeni esikhanyayo.
Ngenxa yokuba izibane ezisemantla zinokufakwa kuphela xa iimeko ezithile zingqamene, ayothusi into yokuba iAurora Borealis ibethe ii-hashtag ezimbalwa kuneminye imimangaliso yendalo!
INtaba i-Everest, China / Nepal
Ityala lemifanekiso: Anton Rogozin / Shutterstock
Nge-1,125,527 ye-Instagram hashtag iyonke, iNtaba i-Everest ibizwa ngokuba yeyesithoba ngobuninzi bemimangaliso yendalo emhlabeni.
Njengeyona ntaba inde emhlabeni, emi kwi-29,000 yeenyawo ukuphakama, iNtaba i-Everest yenye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi emhlabeni. Belangazelela ukubamba iindawo eziphakamileyo ezintle, iindwendwe zithatha i-Instagram rhoqo ukuze zabelane ngeembono ezimangalisayo.
Ngokumxinwa ubeka kwindawo ephezulu ye-10 ene-900,429hashtags, iPamukkale eTurkey yeyona ndawo yeshumi kummangaliso wendalo emhlabeni, uzobe uluhlu lusekupheleni.
Ngamashiti omkhenkce omhlophe omhlophe womkhenkce, ithala eliqaqambileyo, kunye nolwandle olunobisi, amachibi ashushu kaPamkalekale atsalela iindwendwe kwihlabathi liphela kwaye ayinto enkulu kubalandeli be-Instagrammers abafuna ukuphucula indlela abajonga ngayo ukutya.
Okwangoku, iindawo ezimangalisayo ezinjengeSiqithi saseKomodo, iGreat Barrier Reef kunye neCliffs of Moher zonke zibekwe kufutshane neendawo ezilishumi eziphezulu, zifumana ii-hashtag ezingama-83,569, 817,956 kunye nama-635,073 ngokwahlukeneyo.